Fihetsiketseham-panoherana noho ny nampiatoan’i Malayzia gazety roa namoaka trangan-kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Aogositra 2015 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, English, Español, bahasa Indonesia, Català, English
Avy amin'ny pejy Facebook Malayziana mijoro ho firaisankina amin'ny The Edge [Ny Morony]
Mihoatra ny 300 ny mpanao gazety, mpikatroka, mpisolovava ary ireo olompirenena liana ihany koa izay nivory tao amin'ny Tsena Afovoany ao Kuala Lumpur tamin'ny 8 aogositra hanao fihetsiketseham-panoherana ny fampiatoana ny gazety roa sy ny fanakanan'ny governemanta Malayziana ny tranonkalam-baovao iray. Ny hetsika, izay tafiditra ao anatin'ny fanentanana #AtTheEdge, dia malahelo amin'ny hetsika ankarihary ataon'ny governemanta amin'ny fanampenam-bava ny fampitam-baovao.
Tamin'ny 19 jolay lasa teo no notampenam-bava tao Malayzia ny tranonkala mpamoaka tsiambaratelo Sarawak Report noho ny famoahana ‘vaovao tsy voamarina’ momba ny raharahan-kolikoly manafintohina iray mahatafiditra ny 1MDB, orinasam-pampiasam-bola iray tantanin'ny fanjakana. Andro vitsivitsy taty aoriana, naato telo volana ny gazetin'ny The Edge [Ny Morony na Ny Sisiny] noho ny filazana fa namoaka tahirinkevitra noforonina mifandraika amin'ny 1MDB izy ireo. Ity raharaha ity koa dia mahatafiditra ny Praiminisitra Najib Razak taorian'ny namoahan'ny Wall Street Journal tati-baovao iray milaza fa nahazo 700 tapitrisa dôlara amerikana tamin'ny fandefasam-bola amin'ny banky amin'ny alalan'ny 1MDB izy.
Taorian'ny famoriam-bahoaka tao an-tsena, dia nizotra nankany amin'ny tranoben'ny Bar Council ireo vahoaka niorivory ireo. Notakiana tao amin'ny famoriam-bahoaka ny fiarovana ny fahalalaham-pitenenana, ny fanokafana ny fanampenambava ireo tranonkalam-baovao, ny fanesorana ny didy fampiatoana namelezana ny The Edge, ary ny fankatoavana ny zon'ny vahoaka hahalala ny fampahafantarana rehetra momba ny 1MDB.
Indreto ambany indreto ny sasantsasany amin'ny afisy sy sora-baventy tamin'ny fihaonambe :
Avy min'ny pejy Facebook Malayziana mijoro ho firaisankina amin'ny The Edge [Ny Morony]
Indreto ny sary sasantsasany hita ao amin'ny Twitter amin'ny fampiasana ny diezy #AtTheEdge [amin'ny morony] :
Nijoro tamim-pireharehana tamin'ny fihetsiketseha-panoherana niaraka tamin'ny namana mpitendry mozika sy mpanao gazety tao amin'ny [amin'ny morony] androany
Mpandala ny mahavehivavy manohana ny fahalalaham-pitenenana sy fanehoana hevitra
Tsy heloka akory ny fanontaniana momba ny 1MDB
Tsy heloka akory ny fanaovan-gazety
Amin'ny morony, 808
Tao amin'ny fanoratana tamin'ny Facebook i Aruna Sena no naneho firaisankina :
Fihetsika mivandravandra ataon'ny fahefana hamerana anay, olombelona, ny zonay hanana loharanom-baovao sy torohay ny fampiondrehana ny fampitam-baovao sy ny fampiondrehana ny fahazoana vaovao. Fihetsika mivandravandra ihany koa ny fampiondrehana ny fahalalaham-pitenenana sy ny famerana ny fanaovan-gazety.
Tsy very ny fanantenana rehetra raha efa nahita tamin'ny fijoroan'ny fampitam-baovao amin'ny zony hitatitra sy hamoaka vaovao amintsika vahoaka tamin'ny hetsika amin'ny morony omaly. Ary jery mahafinaritra tazanina izany.
Fiolahana tsara ho an'ny 808 [amin'ny morony]. Afaho amin'ny fifehezana politika ny gazety!
Tsy azontsika hohadinoina velively ankehitriny ny fihoaram-pahefana. Azonao atsahatra ny morony [sisiny], atoa, fa tsy azonao aato ny marina!
Misy fivoriana lehibe napetraka hihaonana amin'ny 29 aogositra. Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy hianona fotsiny amin'ny famerana ny fahalalahan-gazety ny resaka. Raha mahazo anarana ho Bersih 4 ity fivoriana ity dia mitaky ny fialan'ny praiminisitra.